Nitsoaka nandositra ilay 4X4 nifaoka olona iray - ewa.mg
Nitsoaka nandositra ilay 4X4 nifaoka olona iray
News - Nitsoaka nandositra ilay 4X4 nifaoka olona iray
Naratra mafy ary tsy nahatsiaro
tena mihitsy ity tovolahy iray, 21 taona eo ho eo, nofaohin’ny
fiarakodia 4X4 iray, mitondra laharana vahiny, tetsy akaikin’ny
Pulman Alarobia, ny asabotsy tolakandro teo. Tsy nahalala nijanona
akory ity fiara 4X4 fa vao mainka nirifatra nandositra. Ilay
tovolahy voadona, nitsirara tsy nahatsiaro tena teo amin’ny arabe.
Ankoatra ny fanapariahana ny mombamomba ity fiara 4X4 ity, izay tsy
misy afa-tsy ny hoe “miloko manga”, ny namonjy ilay naratra aloha
no nahamay ireo polisy etsy Analamahitsy, sendra teny an-toerana.
Avy hatrany dia nentin’izy ireo teny amin’ny hopitaly ity
Fantatra fa na dia mafimafy ihany
aza ny dona nahazo azy, efa manomboka mahatsiaro tena ity tovolahy
ity eny amin’ny hopitaly, amin’izao fotoana izao. Eo am-pikarohana
fatratra ilay fiara 4X4, izay marihina fa tsy voaray ny nomeraony,
kosa ny polisim-pirenena amin’izao fotoana izao. Izay indrindra no
angatahin’izy ireo ny rehetra manam-baovao momba ity fiara ity mba
hampandre na hiantso ny Brigade des accidents amin’ny 034
05 517 24.
L’article Nitsoaka nandositra ilay 4X4 nifaoka olona iray a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny Covid-19: tonga ny fanampiana andiany fahatelo avy amin’ny Sinoa
Andiany fahatelo ny fanampiana avy amin’ny governemanta sinoa tonga teny Ivato, ny alarobia teo. Nandray izany ny ekipan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, notarihin’ny sekretera jeneraly.Nahitana “kit” miisa 20 000 ahafahana manao fitiliana ny tsimokaretina Covid-19 sy “respirateurs” miisa 30 amin’izany fanampiana izany. Tanjona ny hanafoana ny valanaretina Covid-19, nandripaka Malagasy maro tao anatin’ny dimy volana.Fanatanterahana ny fandavantenan’ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena rehetra amin’ny ady atao amin’ny Covid-19 ireny fanampiana ireny, araka ny fandrisihana sy ny fanentanana nataon’ny filohan’ny Repoblika entim-bahoakan’i Sina, i Xi Jinping. Nandritra ny fanokafana ny andiany faha-73-n’ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana no nilazany izany.Nisy ny fandraisana anjaran’ireo teratany sinoa monina sy mila ravinahitra eto Madagasikara amin’ireo fanampiana ireo. Anisan’izany ny orinasa sinoa sy ny mpandraharaha ary ny olon-tsotra maneho firahalahiana eo amin’ny firenena sinoa sy malagasy.Tatiana AL’article Ady amin’ny Covid-19: tonga ny fanampiana andiany fahatelo avy amin’ny Sinoa a été récupéré chez Newsmada.
Pétanque – Analamanga : Vingt-neuf clubs affiliés
Avant le championnat régional, la ligue de pétanque Analamanga a procédé au recensement de ses membres pour cette saison. En effet, 29 sont les clubs qui sont légalement inscrits dans la ligue à l’issue d’une liste publiée hier. Ce sont les clubs affiliés ayant effectué leur engagement. Par ailleurs, la ligue a annoncé que ceux qui ne figurent pas dans la liste, alors qu’ils devraient y être, peuvent encore faire une réclamation. Cette liste provient de la Fédération Sport Boules Malgache, souligne la ligue. Le sommet régional Analamanga de triplette constituée s’étalera ce week-end au boulodrome Para Ivato. Cela concerne toutes les catégories entre autres seniors hommes, dames, juniors et vétérans. Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’à vendredi. Par ailleurs, des concours sont organisés tous les jours par les partenaires de la ligue pour performer les boulistes. Ces concours se déroulent notamment au PAC Ampitatafika, au CBT Anosy, au CAI Ambodin’Isotry, au PCT et IBC Para Ivato. Les noms des clubs affiliés à la ligue Analamanga sont : – Cbi – Cosfa – Cbma- Cbt – Pfam – Ibc – Pac – Cb Zanzibar – Cb Behoririka- Mama – Caip – Ubm- Cbp – Uba – Pca- C Band – Pct – Pcb- Cb-Pro – Vespa – Asut- Abmi – Cb T2b – Cab- Fam – Cbwt – Asbt- Chujdr – Abs. Manjato Razafy L’article Pétanque – Analamanga : Vingt-neuf clubs affiliés a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tsy misy mihaino ? Samy miantso fitoniana amin’izao fiandrasana voka-pifidianana ofisialy havoakan’ny HCC izao ny sehatra rehetra. Anisan’izany ny sehatra iraisam-pirenena toy ny Frankofonia (OIF), ny Vondrona eoropeanina (UE), ny Fivondronamben’ny eveka (Fem), ny FFKM ary koa ireo mpanara-maso fifidianana eto an-toerana sy avy any ivelany miaraka amin’ny fiarahamonim-pirenena. Karazan’ny antso an’efitra ihany anefa izany raha ny tranga miseho etsy amin’ny HCC Ambohidahy. Efa herinandro izao ny hetsika ataon’ireo andiana olona vitsivitsy sy milaza ho mivoy ny fanorenana ifotony (HFI). Miezaka ny mandrangitra sy manao ny fomba rehetra hahitan’ny olona azy ireo amin’ny ambara fa feom-bahoaka, itakiana ny hanafoanana mihitsy ny fifidianana filoham-pirenena. Eo koa ny fitakiana ny hanokafana indray ny lisi-pifidianana na efa mazava aza ny voalazan’ny lalàna fa tsy azo atao intsony izany. Fihantsiana sy amboletra… Efa fihantsiana sy karazan’ny amboletra ny ataon’izy ireo ary tsy mihaino sy manao bemarenina manoloana ny antso avo ataon’ireo sehatra rehetra, indrindra fa ny eo anivon’ny fiangonana, ny amin’ny tokony hitoniana sy hametrahana filaminana, manoloana izao fifidianana izao. Iza ny tena ao ambadik’izao hetsika ho amin’ny fanakorontanana izao ? Efa tonga hatrany amin’ny fandorana fiara ny raharaha, omaly. Hanao ahoana ny hamoahan’ny HCC ny voka-pifidianana rahampitso ? Tahaka ny ahoana ny fepetra horaisin’ny fanjakana sy ny Emmo/Reg satria mety samy ho avy eny an-toerana ny mpiandany amin’ny kandidà roa ho amin’ny fihodinana faharoa. Eo koa ireo miandany amin’ireo kandidà 25, ankoatra ireo liam-baovao. Lalao baolina kitra iraisam-pirenena… Mifanindry amin’izany koa ny lalao baolina kitra iraisam-pirenena etsy Mahamasina, handraisan’ny Elgeco Plus ny ekipa avy atsy Zimbaboe. Raha sanatria resy ny solontenantsika, inona ny hitranga, aorian’ny lalao na ekena aza fa lalao efa ny tolakandro izany ? Mitaky fepetra sy andraikitra manokana avokoa izany rehetra izany mba tena hipetrahan’ny fitoniana sy filaminana eto amin’ny firenena, araka ny antso avo nataon’ireo sehatra samihafa voatanisa eo ambony. Ny fanapahan-kevitra tsy am-piheverana koa anefa, mety vao mainka handrehitra ny afo ? Zaran’ny sasany aza! Randria L’article Antso an’efitra ny an’ny Eveka sy ny FFKM: fihantsiana sy amboletra ny etsy amin’ny HCC a été récupéré chez Newsmada.
Fakana an-keriny an’i Rishi Chandarana : Gadra 10 taona an-tranomaizina i Bora sy ny namany
Niakatra teny anivon’ny PAC tetsy 67ha ny alakamisy teo raharaha fakana an-keriny ny teratany karana Rishi Chan­darana ny taona 2018. Voahe­loka higadra 10 taona an-tranomaizina i Bora sy zandrikely. Voasazy an-tranomaizina mandritra ny 10 taona i Ho­mady Ibrahim na i Bora sy Andriamampionona Onjaniaina na Zandrikely na koa Dadafara. Ireto farany izay efa naiditra am-ponja vonjimaika ny 27 janoary lasa teo noho ny raha­raha fakana an-keriny an’ilay teratany karana Rishi Chanda­rana, ny taona 2018 teny Anda­kana. Araka ny angom-baovao, nitory azy ireo i Milou Zahi­dahy, Navaza Verjee ary Asaga­raly Zahidahy. Tsiahivina fa nirongo fitaovam-piadina mahery vaika Kalachnikov i Bora sy ireo namany. Nitondra fiara iray marika Renault fourgon ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io. Norahonan’ireo olon-dratsy tamin’ny basy i Rishi Chan­darana ny tolakadron’ny 3 jona 2018 tokony tamin’ny 4 ora. Nentin’izy ireo tamin’ny fiarany ihany ilay teratany karana. Taorian’izay, voatazon’ireo jiolahy nandritra ny 10 andro izy. Votsotra kosa izy ny 13 jona 2018 tokony ho tamin’ny 8 ora alina rehefa avy nandoa vola ny fianakaviany.Henintsoa HaniL’article Fakana an-keriny an’i Rishi Chandarana : Gadra 10 taona an-tranomaizina i Bora sy ny namany a été récupéré chez Newsmada.
Fitsoahana ny fonja: mbola ifampitadiavana ireo gadra enina nandositra
Mbola tsy hita nanjavonana raha efa sarona kosa ny sasany. Nambaran’ny eo anivon’ny mpandraharaha ny fonja fa mbola misy gadra tsy hita tamin’ny fahavakisan’ny fonja any Farafangana, ny taona 2020.« Enina ireo tsy mbola hita fa karohina amin’izao fotoana izao amin’ireo gadra, nitsoaka tany amin’ny fonjan’i Farafangana. Mbola handalo fitsarana avokoa ireo efa tratra satria heloka vaovao ny fandosirana ka ho voasazy indray izy ireo », hoy ny talen’ny fandraharahana ny fonja, R. Tovonjanahary, omaly, teny Faravohitra.Tsiahivina fa herintaona katroka tahaka izao, volana aogositra no vaky ny fonjan’i Farafangana ka tafaporitsaka tamin’izany ireo gadra 88. Nitora-bato ny mpiambina sy namaky ny varavarana izy ireo tamin’izany ary nahazo basin’ireo mpiandry fonja. Nisehoana fifandonana koa teo am-pivoahana. Naratra ny telo amin’ireo mpiambina. Nifarimbona ny mpitandro filaminana tany an-toerana ka azo sambo-belona ny 37 raha 20 ireo gadra maty voatifitra ary 31 kosa nifampitadiavana tamin’izany.Resabe teto amin’ny firenenaNiteraka resabe teto amin’ny firenena izany tranga izany. Nanitrikitrika ny fiarahamonim-pirenena PFNOSCM/Voifiraisana fa tsy tongatonga ho azy ireny herisetra miseho lany eto ireny. “Vokatry ny zava-misy iainana ara-toekarena sy sosialy, vao mainka nanery ny fahafahan’ny tsirairay… Mety anisan’ireo valin’ny herisetra ara-drafitra nifanesy nitranga tato ho ato ireny. Manjaka ny didin’ny be sandry amin’ny fiarahamonina. Tsy mino ny fahamarinana, ny rariny sy ny hitsiny, ny tsy fanavakavahana intsony ny fiarahamonina », hoy izy ireo tamin’izany.Efa-taona tsy voatsara tamin’ny halatra akohoNaneho hevitra koa ny mpiaro ny zon’olombelona fa tsy mifanaraka amin’ny zava-miseho ny fepetra noraisina tamin’ny alalan’ny fitifirana sy fanalana ain’olona. Nahitsy koa ny depiote Razafitsiandraofa Jean Brunelle, nilaza fa ohatra ny mora ilay mamono olona. “Nisy gadra efa efa-taona tsy notsaraina kanefa halatra akoho no nanagadrana azy, anisan’ny maty tao anatin’iny raharaha iny”, hoy izy.Araka izany, andrasana ny ho tohin’ny raharaha mba tsy maty momoka tahaka ireo tranga niseho teo aloha. Anisan’izany Antsakabary…Synèse R. sy Fano Nampahafantarina, omaly, ny fizotry ny fifaninanana hidirana ho mpandraharaha ny fonja. Miisa 500 ireo tonga amin’ny dingana voalohany tamin’ireo mpiadina miisa 9 261. Hiakatra amin’ny dingana manaraka izy ireo. Nohatsaraina ny fomba fiasa amin’ny tsy fandeferana amin’ny kolikoly vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Bianco raha tsy nisy izany tamin’ny roa taona lasa. Misy ny fampiasana “camera de surveillance” amin’ireo toerana rehetra hikirakirana ny laza adina.L’article Fitsoahana ny fonja: mbola ifampitadiavana ireo gadra enina nandositra a été récupéré chez Newsmada.